Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး)
Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဗီတာမင်အေကိုအစာအာဟာရကနေ ဗီတာမင်လုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့လူတွေမှာေီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပုံမှန်အစားအစယစားနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဗီတာမင်အေအပိုထပ်ပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းအာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်ခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်အားနည်းခြင်း ၊အသည်းနှင့်ပန်ကရိယ ရောဂါများတွင်ဗီတာမင်အေချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေဟာခန္ဓါကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ် ။ ဗီတာမင်အေကိုကြီးထွားရန်၊ အရိုးများဖွံဖြိုးရန် နှင့်အသားအရေနှင့် အမြင်အာရုံတို့ကောင်းမွန်စေရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ ဗီတာမင်အေချို့တဲ့ခြင်းဟာအမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြဿနာတွေ(ကြက်မျက်သင့်ရောဂါ)နဲ့ရာသက်ပန်မျက်လုံးပျက်ဆီးခြင်းတို့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးပမာဏကတော့သင့်ရဲ့အသက်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကုသမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတို့အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ ဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအများဆုံးရရှိဖို့ဆေးကိုမှန်မှန်သုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးသောက်ရန်မမေ့ဖို့အတွက်ဆေးကိုနေ့တိုင်းအချိန်တစ်ခုတည်းမှာပဲသုံးစွဲရပါမယ်။ ဆေးပမာဏတိုးသောက်ခြင်းတို့ ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပဲဆေးကိုသုံးစွဲတာတို့မလုပ်ရပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ရောဂါဟာသက်သာလာမှာမဟုတ်သလိုဆိုးကျိုးတွေလဲပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရောဂါမပျောက်သေးလျှင် သို့ ပိုဆိုးလာလျှင်ဆရာဝန်နှင့်ပြသရပါမယ် ။ သင့်မှာပြင်းထန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိပြီလို့ထင်ရင်တော့ ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရပါမည် ။
Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးကို အလင်းရောင်များ၊ စိုစွတ်မှုများနှင့်ဝေးရာ အခန်းအပူချိန်အတွင်းမှာသာထားသင့်ပါသည်။ ဆေစကိုပျက်ဆီးခြင်းမဖြစ်စေရန် ရေခဲသေတ္တာ ၊ ရေချိုးခန်းထဲတွင်မထားရပါ ။ ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံကွဲပြားကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဆေးဗူးပါဆေးညွှန်းကိုသေချာဖတ်ခြင်း သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုမေးမြန်းခြင်းလုပ်ရပါမယ်။ ဆေးများကိုလည်း ကလေးများနဲ့ဝေးရာမှာထားရပါမယ် ။
Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်ဟာ ဗီတာမင်အေ သို့အခြားဆေးတစ်ခုခုနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမည်။ ညွှန်ကြားထားသော သို့ မညွှန်ကြားထားသော ဆေးကုသမှုများ ၊ ဗီတာမင်များ ၊ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များကို အသုံးပြုနေခြင်း သို့ အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားခြင်းရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပြထားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အကယ်၍သင့်တွင်ဓါတ်ဟမတည့်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သည့် အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာနှင့် လည်ပင်းတို့ရောင်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါက အရေးပေါ်ကုသမှုကိုချက်ချင်းခံယူရပါမယ်။ အသေးစားဓါတ်မတည့်မှုလေးတွေပဲဖြစ်တာများပါတယ်။ ဆိုးကျိုးလုံးဝမခံစားရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် ။ လူတိုင်းတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုမခံစားရပါဘုး။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ဘေးထ်က်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်သေးရင်တော့ ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ် ။
ဘယ်ဆေးတွေက Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဗီတာမင်အေ ဟာ ဟာသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံတွေပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးအချင်းချင်းမတည့်တာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးတွေကိုစာရင်းပြုလုပ်ထားပြီးဆရာဝန်ကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးများစတင်သုံးစွဲခြင်း ၊ရပ်တန့်ခြင်း သို့ ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဥပမာ ..ကိုယ်ဝန်တားဆေး ၊ သွေးကြဲဆေး၊ကိုလက်စ်ထရောကျဆင်းစေသောဆေးများ၊bexarotene ၊ tretinoin ၊ isotretinoin တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဗီတာမင်အေ ဟာ အစားအစာတွေ အရက်တွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း သို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဆိုးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆေးမသုံးစွဲမီ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဗီတာမင်အေ ဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သက်ရောက်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်ရောက်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့အလုပ်လ်ုပုံ သို့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာရှိနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်ကိုအသိပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ယူနစ်တစ်သိန်းသုံးရက်ဆက်တိုက်ထိုးပြီးလျှင် ယူနစ်ငါးသောင်းကိုနေ့စဉ် ၂ ပါတ်ထိုးရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Vitamin A (Injection) (ဗီတာမင်အေ ထိုးဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁ နှစ်မှ၈နှစ်ကလေးများအတွက်ဗီတာမင်အေယူနစ်၁၇၅၀၀ မှ ၃၅၀၀၀ အထိနေ့စဉ် ၁၀ ရက်ထိုးရပါမယ်။
မွေးကင်းစကလေးတွေအတွက်ကတော့ဗီတာမင်အေယူနစ် ၇၅၀၀ ကနေ ၁၅၀၀၀ အထိထိုးပေးရပါမယ် ။
ဆေးအလွန်အကျွံသုံးမိတဲ့အခါ သို့ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါ အနီးစပ်ဆုံးအရေးပေါ်ဌာနဆီသွားခြင်း သို့ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု ၁၅၅ ကိုခေါ်ဆိုခြင်းပြုလုပ်ရပါမယ် ။
Vitamin A palmitate (Injection) http://umm.edu/health/medical/drug-
notes/notes/vitamin-a- palmitate-injection. Accessed July 15, 2016.
Vitamin A (retinol) http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/vitamin-
a/dosing/hrb-20060201. Accessed July 15, 2016.